Ukuhamba ukusuka eBerlin ukuya eBeijing ngeHelsinki kwiitrilogies ezintathu | Uncwadi lwangoku
Ingqele iyala ukuza, ukwindla phantse kusehlotyeni Kungekho ithontsi lamanzi eliwayo. Ndijonge ngomona kude kakhulu, amazwe apholileyo, kunetha ngakumbi. Ndide ndicinge ngeBeijing, kodwa ikomkhulu laseJamani elisemazantsi onke lisondele kum kwaye ikomkhulu laseFinland libanda. Ndiza kuthatha uhambo kathathu, nangexesha.
Ukukhumbula amabali amathathu okuqala aloo nto UBernie umpu del EBerlin I-30 kunye ne-40s, eyenziwe ngu UPhilip Kerr. Ukubiza iidragons zamnyama zakudala kwi I-Peking yangoku nge Umcuphi uMei Wang, de UDiane Wei Liang. Ukuhamba nabo Oomakhulu abathathu abangaboniyo beka abaphandi engqeleni Helsinki de UMinna Lindgren.
1 I-Trilogy yaseBerlin-uPhilip Kerr
2 I-Trilogy yaseBeijing-UDiane Wei Liang
3 IHelsinki Trilogy-Minna Lindgren
I-Trilogy yaseBerlin-uPhilip Kerr
Ikwabizwa ngokuba IBerlin Noir, le trilogy iqokelela ifayile ye- izihloko zokuqala ezintathu ukusuka kuthotho lweenkwenkwezi kumcuphi waseJamani UBernie umpu. Umbhali waseScotland uPhilip Kerr wenza amatyala akhe ngo-1989 ngenoveli yakhe yokuqala, Ngomhla we-violets, kwaye yaqala le saga iphumeleleyo esele ikho Iincwadi ezilishumi elinanye. Umpu, a Iarhente yangaphambili yeKripo (Amapolisa olwaphulo-mthetho ayesoyikwa ngurhulumente wesithathu), ngoku a umcebisi ngokukodwa ekufuneni abantu abalahlekileyo.
En Ngomhla we-violets siseBerlin ngo-1936, xa isixeko silungiselela iMidlalo yeOlimpiki. Ngo-1990 yapapashwa Ulwaphulo mthetho, apho uGunther kufuneka abuyele eKipro ayokuphanda ukubulawa kolutsha oluninzi olwenzeka ngo-1938. Kwaye ngo-1991 kwavela isahlulo sesithathu sale trilogy, IsiJamani esifunwayo. Sele sikwi-1947, emva kokuphela kwemfazwe ukoyiswa kweJamani. UGunther ufumanisa ukuba ubandakanyeka kwisakhiwo esidibeneyo kunye neenkonzo zobuntlola zamanye amazwe ezichaphazelekayo.
I-Trilogy yaseBeijing-UDiane Wei Liang
Izihloko ezithathu ezibhalwe ngumbhali waseTshayina (ohlala eLondon) uDiane Wei Liang zidityaniswe zangumqulu omnye. Iinkwenkwezi kubo UMei Wang, Omnye wabaphenyi abangumqondiso kwinoveli yolwaphulo-mthetho yaseAsia. Lo mphengululi uyazi kwaye uhamba ngokulula kwi Beijing yanamhlanje kwaye igcwele umahluko.
En Iliso lejade UMei ngumfazi omncinci ozimeleyo osebenza kwi-arhente yabecuphi yabucala. Umthengi ukucela ukuba ufumane endala ilitye lejeyidi ibiwe ngexesha loHlaziyo lweNkcubeko. UMei uza kunyanzelwa ukuba akhumbule kwaye aphande ngelo xesha limnyama lembali yaseTshayina eya kumkhokelela kwi imfihlo egcinwe kakuhle loo nto ayinomdla wokutyhila.
Kwisihloko sesibini Amabhabhathane abafileyo UMei Wang kuya kufuneka enze uphando ukunyamalala kwenkwenkwezi encinci ogama linguKaili kwaye uya kulandelela "ibhabhathane elinamaphepha" ethe wafumanisa kwigumbi lakhe laseKaili.
Okokugqibela, kwi Indlu yoMoya weGolide, UMei uhlangana negqwetha ngethuba elimbeka ukuba aphande ityala lenkampani eyenzileyo iipilisi Iyakwazi ukuphilisa iintliziyo ezaphukileyo. Kwaye kwangaxeshanye umhloli karhulumente ubonakala kwiarhente yomcuphi enomyalelo wokuba ayicime.
IHelsinki Trilogy-Minna Lindgren
Umbhali waseFinland uMinna Lindgren wenze ezi zinto oomakhulu abathathu abangaboniyo kwaye yafumana imvume kubagxeki kunye nabafundi. Kunye Ukuchukumisa okumnyama kwemfihlakalo kunye nokuhlekisa kunye nokuhlekisa. Ifomula yayo ikhumbuza ummelwane wayo ophumeleleyo waseSweden UJonas Jonasson. Umxube wokugxekwa kwezentlalo, uburharha obumnyama kunye nenqaku lamanenekazi amathathu eMarple a la Finnish. Izinto ezamehlelayo nezingalunganga ze USiiri, u-Irma no-Anna-Liisa, abahlolokazi abaphambili, bavuyise abafundi abaninzi kwezi zihloko zintathu.
En Oomakhulu abathathu kunye nompheki oswelekileyo Siyabazi aba bahlobo nabahlali apha Ihlathi leTwilight, igumbi labucala labadala eHelsinki. Kodwa, xa yonke into ibonakala njengesiqhelo, kwindawo yokuhlala kukho ukubulala okungummangaliso ukuba oomakhulu abathathu abamsulwa abanomdla kunye nexesha lokuzonwabisa kuya kuba ngumngeni ukusombulula.
Kwisihloko sesibini, Oomakhulu abathathu kunye nejewellery ngapha nangapha, Aba bahlobo bathathu babona inzolo yobomi babo iphazanyiswa ngabambalwa imisebenzi engapheliyo yokulungiswa Kwindawo yokuhlala. Kanye, Ibhokisi yobucwebe buka-Anna-Liisa iyanyamalala ngaphandle komkhondo. Xa bethatha isigqibo sokufudukela kwigumbi ekwabelwana ngalo, iingxaki zokuhlala kunye ziya kuvela. Bayakuqonda ukuba le misebenzi ikrokrela kakhulu kwaye mhlawumbi bayayigubungela imisebenzi yolwaphulo-mthetho abaya kuthi ngokuqinisekileyo bayiphande.
Kwaye ekugqibeleni, ku Oomakhulu abathathu kunye nesicwangciso sokhuselo, Ekugqibeleni imisebenzi yokuphucula kwiTwilight Forest igqityiwe kwaye abantu abadala banokubuyela ezindlini zabo. Kodwa ngoku ulwalathiso lusezandleni ze umbutho wenkolo yomthetho othandabuzekayo. Nangona kunjalo, kukho umba omnye ochaphazela abahlali kakhulu. Inkqubo ye- ezintsha zeteknoloji abasafuni bantu bancedisayo kubantu abadala. Abahlobo bathathu bacwangcisa isicwangciso ukutshabalalisa inkqubo yekhompyuter oko kuya kubakhokelela intolongo kwaye nantoni na ingenzeka apho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » Ukuhamba ukusuka eBerlin ukuya eBeijing ngeHelsinki kwiitrilogies ezintathu